sawirkan sidaad u jeedaba waxaa la qaday maalintii loo dabaal degayay xornimada taariikhdu malainta waxay ahayd July/1/1960 sawirka si fiicna looma arko oo waxana kusameeyey scan waan sawir 40 sano kor u dhaafay oo aan aad u fiican hada u sii firsato ninka dharka cad ee ciidanka salaanta siinaya waa Madaxwayne Aadan Cade. oo ahaa madax waynihii ugu horeyey ee somaliya ciidan kaad arkaysaan waa kuwii ugu horeyey ee amar dowladeed oo somali leedahay ku shaqeeya.
Sawirkan iyo kan kor ku yaalba waxay somaliya ka yihiil laba taariikhi oo sawir kan waxaa la qaday 10/10/04 waa maalintii loo doortay madax wayanaha cusub ee Somalia. waan C/laahi yuusuf Ahmed.
Taariikhdu waa laydh ku tusa waxaad samaysay.
wacaan oo wanagsan waxaa mahad is ka leh alleh.
waxaad ku soo dhawaataan Webkan aan ugu talada galay taariikhda in aan ku uruiyo.
waxaa webka isku soo habeeey aniga oo ah
Maxamed C/laahi cali Tiriig.
Waa maxay Taariikh ?
Taariikh machaneeda hada figradayda raaco oo aan is waydiiyo waxay taariikh ii la eegtahay in aynoqonkarto waxaan ku macnaayanaya sida tan. Taariikh waxay u qaybsantaa qaybo badan lakiin marka la isku wada keeno waxay isku noqonayaan Taariikh (History) dib u barida nolo lihii iyo dadkii la soo dhaafay. waxaan qabaa wax alaale iyo waxaad dhaaftaaba inay taariikh yihiin. hal midhidh waxaad dhaaftay wuxuu ku noqonay taariikh meel ku taal oo aad hadhow tiraahdo saacadu markay xiliga haayd waxaan qabtay waaxaas iyo waxaas. Taariikhda wax laga badali kara ma jiran wax lagu kordhin karana ma jiraan.
Hadaba Maxaa Loo bartaa Taariikhda?
Hadaan niri Tiiriikhada waa wax la soo dhaafay lamana badal karo maxaa lo bartaa. waxaa loo bartaa qaldaadkii dhacay si dadku ugu cimila qaato haday xumaaye aad hadhowto u ogato inay xumaayeen. oo aad tirahdo waxaasi waa wixii xumaa hadan daba galana waxay i gayanaysaa wada xun.
Waxaa aduunka ka dhacay Laba dagaal oo kal ahaa (Dagaal kii Koowaad ee adoonka Iyo Dagaal kii labaad ee Aduunka )
labadaa dagaal waxaa aad loogu bartaa Taariikhda aduunka maxaa yeelay waa laabada dagaal ee ugu xumaa aduunka intii binaadanku wax qorayeen waxan akhriyayeen. waxaan loobara dadka si aanay hadhow u samayan qald kaas oo kale ah.
Lakiin dadku wax ma ku qaataan Taariikhi hii xun xumaa ee dhacay sida
DAgalkii Koowad kii labaad kan somalia kuli.
waa maya waxay ku qaataan ma jirto waxay sii wadaan dhibtii ku wii ka horey sameeyeen oo kale.
Hal Xiraalaha Wiigan.
(waxaan Tulida geeli qaadi karin oo Arigu qaado?)
Jawaab: Waa jabniinka
( Wax mar kuu buuxo iyo mar kuu dhiman yahayba isku Culays ah? )
Jawaab: Waa Saacada (Saacada marka ay miri ka dhiman yahay iyo markay Buuxdaba waa isku mid )
( Waxaad Sheegtaa Cadka Raga walaaleya? )
waxaa ka soo jawabay wiigan hal xidhalihiisii
Cabdi casiis macalin wana (Hunguriga)
waxaad sheegtaan qofka ugu beenta badan aduunka aana la fahmin beentiisa.
waa qof dadka ku jira been sheegna badan lakiin markuu beenta sheegayo aadan fahamainin qofkas sheega?
Xagee ka joogtaa dunida? AfrikaYurubAasiyaN_AmerikaS_Amerirka
Maxaad Tahay adoo rali ah ? Nin wayneNin wayarGabar waynGabar yarMasheegayo
Halxiraalaha ma taqaan ? HaaMaya
Waa Maxay tani ? (sheeg wax marku dhinayahay iyo marku buxuu isku culaysa ah ? Suaal xumidaaYaa garanaya Adigu sheegHalxiraleMa garanayo
Jawaabta ku qor iyo fah fahin:
Cimilada somaliya Weather